Warqadda Cilmi baarista Kuleejka ee ku taal Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Waraaqda Cilmi-baarista Kulliyadda ee ugu wanaagsan Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Sidee Loo Shaqaaleeyaa Adeegga Qoraalka Warqadda Cilmi-baarista ee Ugufiican?
Mar kasta oo aad ka dalbatid warqad cilmi baaris kulleejo ah adeegga khadka tooska ah ee hibada ah, waxaad bixinaysaa isku darka guuleysta ee cabsida isticmaalka-saaxiibtinimo iyo tayada sare. Waxaad dooran kartaa qoraa madaxbanaan oo xaq u leh ama u oggolaan kartaa amarka in lagu meeleeyo keydka macluumaadka si ay macaamiisha isla markiiba u isticmaalaan. Waqtigan xaadirka ah, waad la socon kartaa qoraaga adoo adeegsanaya xiriir joogto ah, hubinta horumarka warqadda iyo hubinta in warqaddu buuxiso shuruudahaaga.
Ardayda kulleejku waxay inta badan ka cawdaan dhibaatada haysata la socoshada waqtigooda. Sababta ugu weyn ee tani waa jadwalka mashquulka badan. Ardayda kulleejyada badankood waxay leeyihiin jadwal ciriiri ah koorsooyinkooda iyo shaqadooda darteed. Sidaa darteed, waxay haystaan ​​waqti aad u yar oo ay ku qaataan dhammaystirka warqadda waqtigeeda.
Baarayaasha kulleejadu waa inay hubiyaan aqoonsiyada bixiyaha adeegga kahor intaan dalabkooda la dhigin. Waxaa jira adeeg bixiyeyaal bixiya adeegyo si gaar ah, yacni ma hayaan liiska macaamiisha jira. Adeegyadan waa kuwo aan la isku halleyn karin, maxaa yeelay qoraagu ma ogaan doono haddii shaqooyinkoodii hore loo qaybiyay daabacayaasha kale. Adeeg bixiye la isku halleyn karo waa inuu diyaar u yahay inuu u bixiyo liiska macaamiisha macaamiisha si ay qorayaashu u qorsheeyaan talaabada xigta ee ay qaadayaan.
Si loo shaqaaleeyo adeeg bixiya qoritaan tacliimeed oo tayo wanaagsan leh, mid waa inuu hubiyaa haddii qoraagu yahay qoraa aqoonyahan aasaasay. Bixiyeyaasha adeegga sumcadda leh ayaa had iyo jeer lahaan doona armaajo maqaallo akadeemiyadeed si ay ugu muujiyaan macaamiisha mustaqbalka. Qorayaasha tacliinta wanaagsan waxay sidoo kale lahaan doonaan amar wanaagsan oo ku saabsan luuqada Ingiriiska iyo sidoo kale naxwaha. Adeeg bixiye heer sare ah sidoo kale waa inuu sidoo kale siiyaa dib-u-eegis waraaqda cilmi-baarista ee kulleejada sidii iyo markii loo baahdo.
Qorayaasha aqoonta leh ee aqoonta leh waxay sida caadiga ah ka qaadaan ujrada macaamiisha adeegyadooda. Si kastaba ha noqotee, shirkadaha qaarkood waxay u oggolaadaan qorayaasha inay qaadaan lacag saacadle ah. Tani waxay ka dhigan tahay inay iyagu qaadi karaan hal qiime saacaddiiba isla markaana ay leeyihiin mashruucyo aan xad lahayn. Haddii shirkaddu u oggolaato qorayaasha inay ku soo dalacaan sicirka caadiga ah, waxaa la siin doonaa oo keliya marka mashruuca la dhammeeyo.
Qoraagu waa inuu hubiyaa in shaqada oo dhami ay 100% asal tahay. Qorayaasha badankood waxaa loo isticmaalaa inay dhammaystiraan shaqooyinka asalka ah laakiin tani kuma filna inay qormada ku guuleysato. Adeeg wanaagsan wuxuu la shaqeeyaa qorayaal khibrad leh oo awood u leh inay fahmaan shuruudaha iyo qaabka shaqooyinka si waafaqsan.
Qodob kale oo muhiim ah oo go'aamiya guusha adeegga waa waqtiga kama dambaysta ah. Adeegyada ugu fiican ayaa bixin doona waqti macquul ah oo lagu dhammaystiro shaqooyinka. Waqtiga kama dambaysta ah waxaa lagu go'aamin doonaa xaddiga culeyska shaqada iyo tayada warqadda. Waraaqaha sidoo kale waa in la diraa kahor waqtiga kama dambaysta ah si uusan qoraagu u seegin waqtiga kama dambaysta ah.
Qoraagu waa inuu iska ilaaliya xatooyada markuu dhamaynayo shaqooyinka. khayaanada qoraalka qormada waxaa loo arkaa inay tahay anshax xumo. Warqad la duubay lama siin doono dhibcaha saxda ah waxayna si xun u saameyn doontaa shaqada. Haddii ay suurtagal tahay, qof kale waa inuu dhammaystiraa shaqooyinka si aan khatar ugu jirin in la xado shaqooyinka qof kale. Ma jiro wax qiimo ah oo lagaarsiin karo inaad ku lifaaqdo magacaaga qof kale shaqadiisa adag mana jirto wax faa'iido dhaqaale ah.
Inta badan khubarada qorista way ku adagtahay inay la yimaadaan fikrado cusub oo cusub oo loogu talagalay qormooyinka. Ma jiraan wax khalad ah oo ku saabsan dib u adeegsiga qalabka. Si kastaba ha noqotee, way fiicantahay in la isticmaalo qalabka asalka ah halkii aad dib u isticmaali lahayd qormooyinka waraaqihii hore. Waxaa lagama maarmaan u ah adeegyada qorista waraaqaha inay bixiyaan alaab asal ah si meelaynta aan loogu tixgelin inay tahay xatooyo.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee shaqaaleynta qorista qorayaasha iyo tifaftireyaasha ayaa ah inaadan u baahnayn inaad iibsato sahay waraaqo cilmi baaris ah. Qaar ka mid ah khubarada qorista waxay la yimaadaan sahaydooda si ay kuugu deeqaan inay kaa caawiyaan qorista tirada loo baahan yahay ee qormooyinka. Waxaad iibsan kartaa buug ama ebook ay ku jiraan talooyin iyo xeelado ku saabsan qorista qormada. Khabiiradaani waxay ku siin karaan talooyin ku saabsan sida loo qaabeeyo waraaqahaaga iyadoo loo eegayo maaddada.
Markaad shaqaaleyneyso adeegga qorista ugu fiican ee waraaqda cilmi baarista, waxaa muhiim ah inaad noo sheegto waqtigaaga ugu dambeeya iyo sharraxaad faahfaahsan oo ku saabsan noocyada su'aalaha aad jeclaan lahayd in lagaa jawaabo. Sidoo kale waa lama huraan inaad noo sheegto nooca jawaabta aad ka filanayso qoraha. Tusaale ahaan, haddii aad jawaab ka sugayso hal maalin shaqo gudahood, ka dib ku muuji tan dalabka. Qoraagu waa inuu noo sheegaa qaababka uu isagu / iyadu yaqaanay iyo noocyada ku habboon warqaddaada.
Ugu dambeyntii, waxaa ugu wanaagsan inaad noo sheegto waqtigaaga ugu dambeeya. Qorayaasha badankood waxay diyaar u yihiin inay shaqeeyaan waqti go'an oo cayiman. Laakiin qaar ayaa laga yaabaa inay leeyihiin codsiyo daqiiqad ah ee ugu dambeeya. Markaa waxaa ugu wanaagsan in la ogeysiiyo waqtigaaga ugu dambeeya waqtiga. Haddii ay suurtagal tahay, sidoo kale way wanaagsan tahay inaad u sheegto khubarada haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo aad qabtid.